असोज २८ गते ‘हिजो आजका कुरा’ प्रदर्शन हुने | DNFMEDIA
असोज २८ गते ‘हिजो आजका कुरा’ प्रदर्शन हुने
काठमाडौं । अभिनेता सन्तोष पन्तले निर्माण गरेको हास्य प्रदान सामाजिक कथानक चलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’ को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । आफ्नो चलचित्र ०७९ सालको असोज २८ गते दर्शकमाझ आउने जानकारी निर्देशक साकार पन्तले दिएका छन् ।
बिके फिल्मस् र एफडिले बितरण गर्ने फिल्ममा सन्तोष पन्त, साकार पन्त, रमा थपलिया, केकी अधिकारी,ऋचा शर्मा,दिब्यदेव पन्त,रिमा विश्वकर्मा, स्व. जयनन्द लामा, लक्ष्मी भुसाल, जेविका कार्की, रमेश अधिकारी, बिनय कुँइकेल,अनुष्का अधिकारी, निराजनप्रसाद अर्याल,सबिन शाक्य,कमला रेग्मी,रिहान केसी (बालकलाकार) लगायतकोे अभिनय छ ।
पन्त फिल्म प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित फिल्मको कथा पन्तले लेखेका हुन् भने पटकथा सन्दीप किस्नाको छ । रवि सायमीले खिचेको फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा प्रतिभा पन्त, सह निर्मातामा बैकुण्ठ प्रसाद उपाध्याय (अशोक) र सचितकुमार मिश्र छन् । थुप्रै सेलिब्रेटीलाई एकसाथ प्रस्तुत गरिएको चलचित्रको ‘माया जदौ’ बोलको गीत निकै चर्चित छ ।
दुई बर्षअघि अपलोड गरिएको सो गीत युट्युवमा अहिलेसम्म साढे दुई करोड भन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ । दीपक शर्माको संगीत, आनन्द अधिकारीको शब्द तथा रामकृष्ण ढकाल र मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीतको कोरियोग्राफी कविराज गहतराजले गरेका हुन् ।
Previous: देउवाको प्रश्न– आफू मन्त्रिपरिषदमा रहँदा भीम रावलले किन एमसीसी पास गरेको ?
Next: माओवादी युद्धलाई गलत अर्थ्याएको छैनः प्रकाश सपुत